Qabiirka Kubada Cagta Paul Merson Oo Shaki Galiyay Magacaabista Ralf Rangnick Ee Manchester United
HomeWararka CiyaarahaQabiirka Kubada Cagta Paul Merson oo Shaki galiyay Magacaabista Ralf Rangnick ee Manchester United
November 28, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Laacibkii hore ee Arsenal Paul Merson ayaan ku qanacsanayn in Ralf Rangnick uu yahay ninka ku haboon in uu ka caawiyo sidii uu Red Devils uga soo saari lahaa rafaadka.
Rangnick ayaa la filayaa in loo magacaabo xilka cusub ee Ole Gunnar Solskjaer inta ka harsan ololaha, ka dib wuxuu u wareegi doonaa labo sano oo lataliye ah.
Warka ku saabsan magacaabista 63-sano jirkaan ayaa waxaa farxad weyn ka helay taageerayaasha Man United, laakiin Merson ayaa ka walwalsan in khibrad la’aantiisa England ay caqabad ku noqon karto fursadda uu ugu guuleysan karo Old Trafford.
Isagoo la hadlayay Sky Sports News , Merson wuxuu yiri: “Waxaan maqlayaa dadku waxay eegayaan sida uu u weyn yahay – laakiin waligiis ma maamulin England, waligiis ma maamulin mid ka mid ah kooxaha ugu sarreeya adduunka, waa maxay sababta.
“Waxaan maqlaa waxyaabo waa weyn oo isaga ku saabsan, waana dadaal badan yahay, wuxuuna u rogay kooxo yar yar tartamayaasha dhabta ah. Laakiin taasi aad ayey uga duwan tahay, helitaanka Schalke ama Hoffenheim heer gaar ah.
“Waxaan filayaa in tani ay adkaan doonto, tani aad ayay uga sii adkaan doontaa sida ay dadku u maleynayaan.
Kulanka ugu horreeya ee Rangnick ee Man United ayaa laga yaabaa inuu la kulmo Merson kooxdiisii ​​hore ee Arsenal 2-da December.